Warshadda Shiinaha warshad wax soo saar qayb ahaan wax soo saar ah iyo soosaarayaal | Zhenyuan
Tilmaamo farsamo iyo hal-abuurnimo: SKHZ-B nc H-beam machine
1. Habka wax soosaarka ee alxanka H-beam waa in la dhigo h-beam iyadoo la raacayo qaabka "Work" iyo alxanka laba isku xir oo koone ah labada dhinacba isla waqtigaas, taas oo si weyn u kordhineysa waxtarka alxanka. asal ahaan ma liicitaano ka dib markii alxanka.
2. Mashiinka toosinta mashiinka toosinta birta ee qaabeeya H-qaabeeya qaabka toosan wuxuu toos u sixi karaa qallooc xagalka ah ee saxanka garabka birta ah ee H-qaabeeya ka dib markii alxanka ka dib iyadoo la adeegsanayo qalabka wax lagu duubo ee loo yaqaan 'eccentric press', taas oo yareyneysa xoogga toosinta iyo hagaajinta saxnaanta toosinta.
3. Marka laga eego tilmaamaha alxamida, qeexida alxanka H-beamku waa kan ugu weyn Shiinaha, tilmaamayaasha khadadka wax soo saarka alxanka h-beam ee shirkadda ugu caansan ee soo saarista qalabka alxanka (Shirkadda ESAB) ee dibedda waa isku mid.
4. Jidka isu imaatinka iyo kacsiga, isdhexgalka isku imaatinka iyo kacsiga ayaa la qaatay, taas oo yareyneysa nidaamka shaqada isla markaana hagaajineysa wax soo saarka wax soo saarka.
5. Habka xudunta u ah weelka iyo saxanka flange, laba nooc oo ah qaabka xudunta ee hore iyo gadaal ayaa la qaatay si loo hagaajiyo saxnaanta booska.
6. Sheer sheer ayaa jilicsan oo ku xiran qoryaha alxanka iyo alxanka alxanka qoriga alxanka waa la sixi karaa.
7. Weld fillet Large, iyadoo la isticmaalayo labalaab (DC + AC) silig laba jibbaaran, laba arc, laba jibbaarada habka alxanka.
8. Keenista kontoroolka PLC, lagu kalsoonaan karo, si fudud barnaamijka.
9. Isla saldhigga, dhameystirka joogtada ah ee h-beam ee habka wax soo saarka ee kacsiga, alxanka, lafaha, qaadista, soo deynta iyo habab kale.
Khj-c hagaajin flange hagaajiye
Sibj-c jiheeyaha flange jiifka ah waxaa loo isticmaalaa hagaajinta flange ee birta H-beam Ka dib markii H-beamku dhameystiro habka alxanka, saxanka baalasha ee h-beam waa la beddeli doonaa iyadoo la raacayo ficilka dalabka alxanka, waana in la saxo ka hor Qalabkan waxaa badanaa loo isticmaalaa saxanka saxanka baalasha ee h-beam iyo T-beam ka dib marka la xiro.
Qalabka kale waa sida soo socota:
Xakamaynta mashiinka goynta / mashiinka goynta tooska ah ee madaxa badan, CGL-4000 / Mashiinka jarista birta, KT-462 / mashiinka goynta semi-otomaatiga ah, CG2-150B / mashiinka goynta nuqul, KG-30 / CNC mashiinka qodista cabirka Bai oo dhan / mashiinka qodida radial, 7-3040 * 16 / Mashiinka jarista gawaarida magnetic, SAG- / lathe, CA6140 / qodista iyo mashiinka wax shiida, ZX-32 / iskuduwaha mashiinka caajiska ah, T4240 / Mashiinka goynta khadka kala goynaya, BH6070 / Saxaafada toosan, Ya32-31 / saxaafadda jiifka ah, DC-315 / saxanka mashiinka xiiraya saxanJz016-250 / dhamaadka mashiinka wax shiidaya TXSOB / GD-20 / qodista korantada magnetic RD-32A / alxanka DC AX5-50 / alxanka AC BXI-500 / C02 alxanka YM-500KR / Qaansada hoose Mashiinka alxanka NZA-1000 / koronto qalajinta sanduuqa HY704-4
- 50 / foornada qalajinta qulqulka HI / 4 l - 20 koronto-dhaliye koronto / dhaliyaha naaftada, 200 kw / mashiinka sandblasting PBS - 100 r / mashiinka buufinta rinjiga GPQ9C / fargeeto b / kiciyaha CDWllHNC CPQ - 1-50 * 2500 / rullaluistemadka alxanka jir HGZ - 5 a / flange mishiinka toosinta YTJ 50 / Xiinka baaraha ultrasonic ECHOPE220 / mitirka heerkulka dhijitaalka ah RKCDP - 500 / cabirka dhumucda filimka 345 fb '- MK Ⅱ / clip clip-on ammeter 2003 / heerkulka iyo qoyaanka mitirka WHM5 / weld xukumiSK / qalabka cilladaha maqalka 'DA-400S' / vernier caliper.
Goynta CNC ee alaabta ceeriin ah, isku soo ururinta qalabka, alxamida, saxitaanka, daaweynta dusha sare, rinjiyeynta
Muuqaalka Wax Soo Saarka 1
Muuqaalka Wax soosaarka 3
Muuqaalka Wax Soo Saarka 2
Muuqaalka Wax Soo Saarka 4
Hore: Nidaamka Rack
Xiga: Soo bandhig qayb ka mid ah alaabada shirkadda
Dhismaha Aaga Warshada